विश्वकप फाइनलका ६ रोचक घटना ! – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकप फाइनलका ६ रोचक घटना !
मस्काे । रसियामा सम्पन्न २१औं संस्करणको विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल निकै रोचक रह्यो । यो विश्वकपमा अचम्मका प्रदर्शन देख्न पाइए । सबैभन्दा बढि रोचक यो पटकको विश्वकप फाइनल रहेको विभिन्न विश्लेषकले बताएका छन् । ऐतिहासिक फाइनल रहेको फुटबल पण्डितहरु बताउँछन् ।
आइतबार सम्पन्न विश्वकप फाइनलमा सायद केही छुटेन- विवादित निर्णय, खेल हुँदैगर्दा मैदानमा मानिस छिरेर अवरोध, विश्वकपको फाइनलमा पहिलो आत्मघाती गोल, पेलेपछि फाइनलमा पहिलो किशोर गोलकर्ता अनि हाँस्यास्पद गोलकिपिङ्ग कमजोरी ।
भरपुर मनोरञ्जन, विवाद, रोमाञ्चकता र उत्साह दिएर गएको छ, विश्वकप फुटबलको फाइनल । मस्कोमा आइतबार राति भएको फ्रान्स र क्राएसियाबिचको खेलपछि फ्रान्स फेरि विश्व विजेता बनेर उदाएको छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर विश्वभरका समर्थकको नजरमा परेको क्रोएसियाले उसलाई कडा चुनौती दियो । दुई वर्षअघि घरेलु मैदानमा भएको युरोकपमा फाइनलमा पराजित भएको फ्रान्सले अहिले विश्वकप ट्रफी उचालेर त्यो हारको पीडा भूलेको मात्रै छैन नयाँ यात्राको सुरुवात पनि गरेको छ ।
२० वर्षअघि घरेलु मैदानमा भएको विश्वकपमा पहिलोपटक उपाधि उचालेको फ्रान्सले अहिले विदेशी भूमिमा पनि आफूलाई प्रमाणित गरेको छ । फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४-२ ले हराएर उपाधि जितेको यो खेल साँचो अर्थमा सम्झन लायक बनेको छ ।
सर्वाधिक गोल भएको फाइनल मध्ये एक
प्रायः विश्वकपको फाइनलमा धेरै गोल भएको पाइँदैन र गोलका लागि खेलको अन्तिम समयसम्मै पर्खनु परेका इतिहास छन् । तर यो विश्वकपमा सुरुदेखि नै गोल भयो । फ्रान्सको चार र क्रोएसियाको दुई गरी यो फाइनलमा ६ गोल भयो । यसअघिका चार विश्वकपको फाइनलमा भएका कुल गोल र यो बराबर हो । पछिल्लो पटक फाइनलमा दुई भन्दा बढी गोल भएको सन् १९९८ मा, जुन बेला घरेलु मैदानमा फ्रान्सले उपाधि जितेको थियो ।
विश्वकप फुटबलमा को खेलाडीले कुन अवार्ड पाए ? हेर्नुस्
विश्वकप फुटबलः फ्रान्सलाई उपाधिसहित ४ अर्ब, अरुले टिमले कति पाए ?
सन् १९५८ यता विश्वकप फाइनलमा धेरै गोल भएको खेलमा परेको छ फ्रान्स र क्रोएसियाबिचको खेल । सन् १९५८ मा ब्राजिलले स्वीडेनलाई ५-२ ले हराएको थियो । यो विश्वकपमा ६४ खेलमा १६९ गोल भयो । चार वर्षअघि ब्राजिलमा भएको विश्वकपमा १७१ गोल भएको थियो र नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो । यस्तै सन् १९९८ को विश्वकपमा पनि १७१ गोल नै भएको थियो ।
भिएआरलाई भुल्न सकिँदैन
भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री, भिएआर प्रयोग गरिएको यो पहिलो विश्वकप फुटबल हो । समूह चरणका प्राय सबै खेलमा भिएआर प्रयोग भयो । त्यसपछि नकआउट चरणका अधिकांश खेलमा पनि यसले प्राथमिकता पायो ।
फाइनलमा यसको प्रयोग गरियो र फ्रान्सले पेनाल्टी पायो । सामुएल उमटिटीले इभान पेरिसिकको हात तर्फ कर्नर फिल्क्डि गरे, सुरुमा रेफ्रीले पेनाल्टी दिएनन्, तर भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्रीसँगको लामो छलफलपछि रेफ्री स्क्रिनमा रि-प्ले हेर्न गए अनि फ्रान्सलाई पेनाल्टी दिए ।
एन्टोनी ग्रिजम्यानले गोल गरे । तर धेरै मानिस भिएआरप्रति आक्रोशित छन् । धेरै पटक हेरेपटि रेफ्री नेस्तोर पितानाले पेनाल्टी दिएका थिए । तर धेरै फुटबल पण्डितले यो पेनाल्टीको निर्णय गलत रहेको बताएका छन् । ग्रिजम्यानले पेनाल्टीमा गरेको गोल यो विश्वकपमा भएको २२ औँ पेनाल्टी गोल हो । रुस विश्वकपमा २९ पटक पेनाल्टी प्रहार भयो र यो सन् १९६६ यताकै धेरै हो ।
फाइनलमा पहिलो आत्मघाती गोल
यो विश्वकपमा कुल १२ पटक आत्मघाती गोल भएको छ । त्यो भन्दा पनि यो विश्वकपको फाइनल खेलमा आत्मघाती गोल भयो, फाइनलमा आत्मघाती गोल भएको यो नै पहिलो पटक हो । क्रोएसियाका मारियो मान्जुकीले १८ औँ मिनेटमा नै आत्मघाती गोल गरेका हुन् । फ्रान्सका ग्रिजम्यानले प्रहार गरेको फ्रि-किक बल मान्जुकीले हेड गरेर क्लियर गर्न चाहन्थे, तर आफ्नै पोस्टमा गोल भयो र फ्रान्सले १-० को अग्रता लियो । यो विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता ह्यारी केनले गरेको गोलको दोब्बर आत्मघाती गोल भयो ।
पेलेपछिका पहिलो किशोर गोलकर्ता
फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे विश्वकपको फाइनल खेल्ने इतिहासको तेस्रो किशोर फुटबलर हुन् । उनी फाइनलमा खेलमा गोेल गर्ने दोस्रो किशोर खेलाडी बनेका छन् । १९ वर्षका एमबाप्पेले क्रोएसियासँगको खेलमा खेलमा एक गोल गरे । उनी ब्राजिलका पेलेपछि विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने पहिलो किशोर खेलाडी बनेका छन् ।
पेलेले सन् १९५८ को विश्वकपको फाइनलमा एक होइन दुई गोल गरेका थिए । एमबाप्पेले यो प्रतियोगिताको सुरु तिर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वको ध्यान तानेका थिए । उनले अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनासँगको खेलमा दुई गोल गरेका थिए, जसले उनलाई पेलेपछि विश्वकपको एकै खेलमा दुई गोल गर्ने पहिलो किशोर खेलाडी बनाएको थियो ।
उनले विश्वकपमा चार गोल गरे र प्रतियोगिताको युवा खेलाडी अवार्ड पाए । एमबाप्पे अब विश्व फुटबलमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीले लिँदै आएको स्थान कब्जा गर्नका लागि तयार रहेको फुटबल पण्डितले बताएका छन् ।
विचित्र गल्ती, हाँस्यास्पद गोल
४-१ ले पछि परेको अवस्थामा फ्रान्सका गोलरक्षकले अपत्यारिलो र विचित्र खालको कमजोरी गरे, जसले क्रोएसियालई लाइफ लाइन दियो । गएको सिजनको च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा लिभरपुलका गोलरक्षक लोरिस कारिउसले सम्भवतः सबैभन्दा खराब गोलकिपिङ्ग मिस्टेक गरेका थिए र रियल मड्रिडले गोल गरेको थियो । तर मस्कोमा आइतबार राति फ्रान्सका गोलरक्षक ह्युगो लोरिसले विचित्रको गल्ती गरे ।
सामुएल उमटिटीले कप्तान पनि रहेका गोलरक्षक लोरिसलाई बल पास दिए । लोरिस नजिकै रहेका मान्जुकीलाई छक्याउन बलसँग क्याजुअल्ली खेलिरहे । लोरिसले बल हाने तर त्यो यस्तो थियो कि अघि रहेका मान्जुकीको गोडामा पुग्यो र त्यसलाई मान्जुकीले गोलमा परिणत गरे । यो निकै कमेडी गोल थियो ।
मैदानमा दौडिए दर्शक
रुसमा विश्वकप हुने भन्दा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए कि त्यहा रंगभेदी व्यवहार हुनेछ, गुण्डागर्दी हुनेछ र समलिंगी समर्थकमाथि हिंसा हुन सक्छ । तर प्रयोगिता निकै शान्त तरिकाले भयो । फाइनल खेलमा भने मैदानमा केही मानिस छिरे खेल भइरहँदा । रुसको पंक रक ग्रुप पुरी रिओटले त्यसको जिम्मेवारी लिएको छ । आफूहरुले मैदानमा छिरेर रुसमा भइरहेका धेरै राजनीतिक मुद्दामा विरोध जनाएको उनीहरुको भनाई छ । सुरक्षा स्टाफले उनीहरुलाई तत्काल मैदानबाट निकालेका थिए । मैदानमा छिरेका केही दुई टिमका खेलाडीसँग ठोक्किएका थिए । –देशसञ्चार\_एजेन्सी
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, france